सुनको मूल्य घट्यो, आइतबार कतिमा हुँदैछ कारोबार? - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौंः शुक्रबार ७० हजार ६ सय रुपैयाँ पुगेको सुन आज २ सय रुपैयाँ घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी महासंघका अनुसार आइतबार तेजावी सुन प्रतितोला ७० हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
महासंघका अनुसार आज तेजावी सुनको मूल्य पनि घटेको छ । आज तेजावी सुन प्रतितोला ७० हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । शुक्रबार तेजावी सुन प्रतितोला ७० हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
याे पनि पढ्नुस बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा कारोबार हुँदैछ ?
शुक्रबार ८ सय ५० रुपैयाँ पुगेको चाँदी आज पनि त्यहीँ मूल्यमा कारोबार भइरहेको महांसघले जनाएको छ ।